IBiscoito Bravo AL-Isithuba esiVulekileyo [RRAL n.º 1235] - I-Airbnb
IBiscoito Bravo AL-Isithuba esiVulekileyo [RRAL n.º 1235]
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguBiscoito Bravo
UBiscoito Bravo yi-Superhost
ICasa do Biscoito Bravo yindawo epholileyo yokuhlala ekufutshane nolwandle kunye neendlela ezininzi zokuhamba. Ifumaneka kwirhamente yaseBiscoitos, kwisiqithi saseTerceira, ejongene nolwandle, igadi encinci enezityalo ezihlala zikho, ezihombisayo nezinevumba elimnandi.
Eli gumbi linendawo evulekileyo eneendawo ezi-4: igumbi lokulala, igumbi lokuhlala, ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela labucala, kunye negumbi labucala. Ixhotyiswe ngeebhedi ezimbini ezimbini, isifuba sedrowa, ikona yokufunda, isofa kunye nombono omangalisayo wolwandle.
Egadini unokufumana imithi yeziqhamo, iintyatyambo, imifuno enamakha kunye nezityalo zokugalela.
4.91 · Izimvo eziyi-101
I-parish yaseBiscoitos ikumasipala wasePraia da Vitória, kwisiqithi saseTerceira, eAzores. Igama lale ndawo livela kumhlaba otshisiweyo owenziwe yi-volcano (basalt) eyenza i-parish.
Iwayini yaseVerdelho ngokwesiko eveliswa kula mazwe ikumgangatho oncomekayo. Yayisetyenziswa ngexesha lokufunyanwa ngamaPhuthukezi njengoko yayigcina umgangatho wayo elwandle. Kukho iMyuziyam yeWayini kwirhamente, eyasekwa ngo-1990 yiCasa Agrícola Brum, apho kunokwenzeka ukujonga izixhobo ezisetyenziswa ekuvuneni, iifoto kunye namaxwebhu embali anxulumene nemveliso yewayini kunye nokuvuna.
Ngenxa ye-microclimate yayo ekhethekileyo, efana ne-fajãs, i-Biscoitos yindawo ebalaseleyo yokuhlamba. Sinokufumana amachibi amaninzi endalo phakathi kwamatye e-basalt avela kwimbali yogqabhuko-dubulo lwentaba-mlilo, awona aziwa kakhulu asuka eAlgar do Carvão kumbindi wesiqithi.
Ecaleni kolwandle, kunokwenzeka ukufumana iinqaba ezincinci zomkhosi kunye nemisele, esukela kwi-16th kunye ne-17th inkulungwane, ephuma kwinkqubo yokuzikhusela ekuhlaselweni ngabaphangi kunye nababucala apho iparishi yayijoliswe kuyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Biscoito Bravo
Sisoloko sifumaneka ukunceda kunye nokunxibelelana neendwendwe zethu! Sihlala ixesha elininzi lonyaka kumgangatho ongezantsi kwendlu ngoko ke sifumaneka sobabini emntwini nangefowuni ukunceda xa uyifuna..
Inombolo yomthetho: 0231-0808-5707